Akụkọ - Gịnị bụ mmepe nke usoro ọgwụgwọ ikpo ọkụ maka nchara nchara dị elu 23MnNiMoCr54?
Kedu ihe bụ mmepe nke usoro ọgwụgwọ ikpo ọkụ maka nchara nchara dị elu 23MnNiMoCr54?
Mmepe nke usoro ọgwụgwọ ọkụ maka igwe nchara ọkwa dị elu 23MnNiMoCr54
Ọgwụgwọ okpomọkụ na-ekpebi ịdị mma na arụmọrụ nke eriri njikọ njikọ gburugburu, yabụ, usoro ọgwụgwọ ọkụ dị mma na nke ọma bụ ụzọ dị mma iji hụ na nkwụsi ike nke nchara dị elu.
Usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọkụ nke 23MnNiMoCr54 steel chain chain
Usoro ihe ọkụ ọkụ na -eme ugboro ugboro nwere njiri mara ọkụ ọkụ ngwa ngwa yana obere ọxịdashọn, nke na -abụghị naanị kwekọrọ na mmepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ugbu a, kamakwa ọ na -erute ụfọdụ ntụnyere nke ike na ike njikọ njikọ ígwè. Usoro a kapịrị ọnụ nke ịnabata ọgwụgwọ ọkụ ọkụ ọkụ ugboro ugboro bụ ịnabata ọkụ ọkụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke ngwa ọkụ ọkụ induction nke mbụ, iji mata nkewa nke agbụ ígwè na-agbụ agbụ. A na -ejikwa ntụpọ infrared na -achịkwa oke ịmanye na iwe ọkụ tupu etinye ọkụ n'agbụ. Site na nnwale a na -eme, a na -achọpụta na igwe jụrụ oyi maka imenyụ na iwe bụ mmiri, a na -achịkwa okpomọkụ mmiri n'okpuru 30 ℃. Ekwesịrị ịchịkwa ike nke imenyụ ọkụ n'etiti 25-35kw, ekwesịrị ịchịkwa ọsọ yinye na 8-9hz na ekwesịrị ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ n'etiti 930 ℃ -960 ℃, ka ike nke akwa na sirinji siri ike nwee ike mezuo ụfọdụ ihe achọrọ. . A na-achịkwa ike kpo oku nke usoro iwe ọkụ na 10-20kw na a na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ na 500 ℃ -550 ℃. A na -edobe ọsọ yinye n'etiti 15 na 16Hz.
(1) Na mbido mbụ nke ịme ihe okirikiri njikọ ígwè, usoro ọgwụgwọ ọkụ bụ ọkụ na -enwu enwu, dị ka ọkụ ọkụ rotary hearth. A na -eji ọkụ convection eme ihe maka iwe ọkụ. Usoro a chọrọ ogologo oge kpo oku na arụmọrụ dị ala, ụfọdụ n'ime ha chọkwara yinye ogologo traction. N'ime usoro kpo oku niile nke yinye ahụ, n'ihi oke ọxịdashọn dị elu, ọ na -esiri ike ịnweta ọka austenite dị mma, nke na -emecha na -eduga n'ịdị mma nke agbụ ígwè njikọ gburugburu nke mepụtara n'oge ahụ. Site na mmepe na -aga n'ihu nke teknụzụ ọgwụgwọ ọkụ, a na -eji usoro kpo oku etiti induction nke etolitere na ọkwa ikpeazụ, na mma ọgwụgwọ ọkụ nke agbụ ígwè njikọ gburugburu ka emeela nke ọma.
(2) Teknụzụ tempering technology, mbụ ojiji nke edo okpomọkụ tempering, ugbu a. Mmepe nke kwụsiri ike karịa bụ tempering ugboro ugboro dị iche iche dị iche iche na ịkpa oke edo edo yana mgbakwunye tempering dị iche iche. Ihe a na-akpọ tempering temp temp bụ ịtụle na isi ike nke akụkụ ọ bụla nke njikọ njikọta bụ otu mgbe iwechara ọkụ, mana njikọ eriri ahụ bụ ịgbado ọkụ. Ọ bụrụ na ọnọdụ iwe ọkụ dị oke ala, njikọta ịgbado ọkụ dị mfe mgbaji, na ike njikọ njikọta dị elu, esemokwu dị n'etiti mpụga ogwe aka kwụ ọtọ na ngbanwe etiti nke onye na -ebu ya dịkwa mfe imepụta mgbawa. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ntakịrị, ike nke yinye nwekwara ike belata. Ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche na -anabata ọkụ ọkụ induction, nke dabara adaba maka ọnọdụ kpo oku nke agbụ ahụ, ya bụ, elu nke ubu agbụ nwere oke ike ma na -eyi nguzogide, na ogwe aka kwụ ọtọ nwere obere ike na ezigbo ike. Usoro ọgwụgwọ ọkụ a nwere ike melite ịdị mma nke yinye.
Oge ezipụ: Jun-15-2021